Ukulele Must Be Love « Wonder How To
Ukulele Must Be Love
How To : Play "I'm in the Mood for Love" on the ukulele
Want to play "In the Mood for Love" by Jimmy McHugh & Dorothy Fields on the ukulele? Learn how with this free video ukulele lesson from Ukulele Mike. Whether you play the ukulele or bass kazoo, there is no better way to improve your chops than by learning to play your favorite ...more
How To : Play "Can You Feel the Love Tonight" by Elton John on the ukulele
Want to play "Can You Feel the Love Tonight" from Walt Disney's The Lion King on the ukulele? Learn how with this free video ukulele lesson from Ukulele Mike. Whether you play the ukulele or bass kazoo, there is no better way to improve your chops than by learning to play your ...more
How To : Play "Do You Believe in Magic" by the Lovin' Spoonful on ukulele
Want to play "Do You Believe in Magic" by John Sebastien of the Loving Spoonful on your ukulele? Learn how with this free video ukulele lesson from Ukulele Mike. Whether you play the ukulele or bass kazoo, there is no better way to improve your chops than by learning to play y ...more